Lapho ecabanga ukuthi intsha, ngokushesha ezifika engqondweni iculo romantic, izinkondlo yezimbongi, abahambi ngaphansi inyanga, kusuke kulindelwe lukhulu lapho kanye amathuba engapheli. Noma kunjalo, udonga lwangaphandle kuphela. Isikhathi sobusha ngempela isikhathi ezithakazelisayo futhi inselele yokufunda ngezinto kwengqondo.
Uyini kwentsha: yencazelo
Isikhathi sobusha esiteji of nokuvuthwa womuntu ngokomzimba, kanye nentuthuko yomuntu siqu, okuyinto amanga esiphakathi kobuntwana nobudala. Kusukela umbono kwengqondo kuyinto aphuma kwencika esivela ingane, kutimela kanye nomthwalo wemfanelo esingokwemvelo abantu olusebenza. Kusukela umbono ka izitho zomzimba okwamanje uqeda ngokomzimba futhi nokuvuthwa zocansi. Futhi, ukuzuzwa ukuvuthwa yezenhlalakahle libhekene umqondo ezifana "ubusha" noma "intsha". Ubudala umkhawulo kunqunywa isikhawu esukela kwengu-14 kuya ku-18, uma sikhuluma Psychology kazwelonke. ochwepheshe Foreign nabo bayakholelwa ukuthi leli intsha iqala nge 16.
Tindlelanchubo inkinga wobusha
"Kuyini intsha?" - ingenye imibuzo endala ukuthi wake wazibuza kwengqondo. Naphezu kwesibalo omkhulu ezenzekayo theory kanye nocwaningo ezingokoqobo, lolu daba namanje uhlala langempela. Kungaba ibhekwe ngokombono izindlela ezilandelayo:
ithiyori Biogenetic kuqhakambisa izici bokuphila kanye nokuthuthukiswa kwemiphakathi ngokwengqondo. Lokhu kusho inqubo nokuvuthwa lomzimba umuntu okwenzeka ku izigaba ezithile, kuba jikelele. Lo mbono e yayo inquma ukuthi kunini lapho kungashiwo kubantu akunakubangelwa isigaba "intsha". Ubudala imikhawulo - ukuqala ukuthomba (engu-12) nangaphezulu ebudaleni egcwele (engu-25), osemusha kubhekwa ukuba athambekele romanticism.
Sotsiogeneticheskaya theory uchaza ukubaluleka intsha ngesisekelo ukuthi luhlobo luni lwendoda senzeka isakhiwo somphakathi. Ungaba nobuhlobo obuseduze phakathi yemvelo ubuntu kumiswa nezakhiwo medium. Esemncane Ukwakheka kwezitho sinesimo sengqondo, izici zokuziphatha, kanye indilinga labangane. Kulesi ibanga lobudala kungukuthi esibekiwe, njengoba nje kuvamile namanje zomuntu siqu.
indlela Psychogenetic kuqhakambisa izinqubo ngokwengqondo. Lokhu kuthambekela ligxile imizwa ukunquma izici zokuziphatha. Kuleso naleso sigaba umuntu ozuza zonke izici ezintsha ayengenawo ngaphambili. Youth - isigaba yesihlanu. ngalesi sikhathi kukhona nokuqaphela indoda yokuhluka kwakhe kwabanye kuphela futhi okwakhe.
Indlela eqotho ngesikhathi esifanayo uyakucabangela zonke izici (they guided ngodokotela yasekhaya) e kwencazelo "ubusha". Ubudala kukalwa isikhathi kusukela ekuqaleni zokuthomba kuze kumiswa yokugcina yomuntu.
imisebenzi ehamba phambili
Noma yimuphi isikhathi ekuphileni kwebantfu ehambisana nomsebenzi. Kuyini osemusha? Lokhu, ngaphezu kwakho konke, kukhethwa indlela yokuphila, okuyinto linendawo ekhethekile professional lokuzibusa. Ngakho, kukhethwa umsebenzi esikhathini esizayo kuba emaphakathi udaba usakhula.
Uma sicabangela isidingo ukuthola ubuthishela esemncane kuhambisana ukuqeqeshwa okuqhubekayo. Ngesikhathi esifanayo kuba okujule nakakhulu futhi bayazi kuka isencane. It libhekene izici ezilandelayo:
ezibanzi bezibona ezijulile impahla zemfundo okuhloswe ngaso ekwakheni ikusasa ulwazi professional;
Ngaphezu reception yokwenziwa kolwazi, zokungcebeleka ngakunye umsebenzi futhi uzibuse zokusesha.
Komphakathi izisusa usakhula
, Ubusha, ukuvuthwa - yokuphila komuntu ngamunye libhekene izinkathi Motifs ezithile ezichaza imisebenzi yayo. Abantu abasha agcwele izifiso kanye amathemba esikhathi esizayo. Kule ndaba, ziqondiswe lezi zinto ezilandelayo:
inkolelo yokungafi isidingo yentuthuko okuqhubekayo, okuyinto kufezwa ngokusebenzisa imfundo Ngokuqhubeka;
professional lokuzibusa, okubangelwa isidingo sokulungiselela esizayo ukuphila ezimele;
ugqozi kwezenhlalo, sishukunyiswa isifiso sokusiza abanye.
Ingabe Zikhona Izimo Ezenza ngokukhetha profession esizayo
Njengoba sazi ukuthi abantu abasha nentsha kufanele ukhethe umsebenzi esikhathini esizayo, benaka kakhulu odokotela bengqondo izizathu. Ngakho, kukhona eziyinhloko oluthandwa zimi kanje:
nomphakathi - udumo ithuba ukuthatha indawo yabo efanele emphakathini;
ubuntu - ukuba khona izimfanelo kanye nezimfanelo ezakhayo ezidingekile abanomsebenzi othile;
impahla - ikhono ukunikeza yena nomkhaya wakhe a ukuphila kahle.
Zhiznepolagayuschih izinkinga isisindo libhekene nalesi sikhathi esemncane. Iminyaka yokuphila osemusha akhiwe eziningi ezisemqoka, ayinhloko yilezi ezilandelayo:
pre-ukukhethwa profession esizayo, okuyinto sakhiwa esibalulekile isikhundla, amakhono kanye kuqala emkhakheni;
kutibophelela eziveza ukwazi yomphakathi, futhi ubudlelwane obufanele;
ukukhula ka umsebenzi womphakathi, engesiyo evamile intshisekelo kanye isifiso abahileleke ngokuqondile izenzakalo;
kumiswa isimo ku-kube kanye izimpikiswano eziyisisekelo;
ukunwetshwa ezinehuha, kanye nombuzo obalulekile eholela isidingo sokusebenzayo ezibonakalayo ezengeziwe;
umumo yezenhlalakahle lomuntu, okusho ekufuneni endaweni yabo emphakathini;
Ukuthola izimpendulo zemibuzo mayelana nenjongo yokuphila PHETHO yomuntu kuwo.
Kumiswa ungubani intsha
Le nsizwa ngesikhathi iphuzu elithile kuba indlela self-ukwakhiwa, okuyinto kuhlangene ngokungenakuhlukaniswa ukwakheka okubizwa ngokuthi "mina". Kuziwa ezindaweni ezilandelayo:
kumiswa isimo sengqondo esihlukile-sithombe ngokomzwelo (nemizwa ebuhlungu akuzona nje yokusabela emicimbini engaphandle, futhi izici siqu);
ukugeleza engelapheki yokuqwashisa isikhathi (leli qiniso kubangela insizwa ukuba bacabange ngokungathí sina ngekusasa kanye ekubhaleni uhlelo ukuphila ngabanye);
kumiswa umbono ephelele, hhayi kuphela umzimba wakho kanye Sakhiwo sangekhatsi, kodwa futhi zokuziphatha, volitional nezimfanelo bokusungula.
Phakathi ebusheni bakhe le nsizwa iqala ukuba aphinde acabange ubuhlobo bethu nabanye, ikakhulukazi nontanga. Ngakho, bahlukene ngezigaba ezimbili - bangani nebangani emzabalazweni. Eyokuqala ziwukulinganisela kakhulu, lezo babemhlonipha nokuthembeka. Nge bonke abanye ontanga yabo, abantu abasha ukwakha kobungane nobudlelwane, okuyinto ziyabonisa futhi ukwelashwa nomusa, ihlonipho ukusekelana.
amaqhinga okuxhumana kanye wokwakha ubudlelwano ontanga yakhiwe kakhulu ngesisekelo ukuchuma esizayo (kokubili ngokwengqondo nangokomzimba). Esikhathini umbuthano yokuxhumana ukuhlala abantu ezithakazelisayo kakhulu futhi "ewusizo". I nabanye babhekene uhlobo lokwehlukaniswa ngokomzwelo. Noma kunjalo, ngokuvamile ubungani bobusha idealized futhi luyakhohlisa.
Futhi, ngoba esemncane libhekene okuvela enjalo nemizwa ejulile, efana uthando. Lokhu kungenxa nje kuphela kuze kube sekupheleni zokuthomba, kodwa futhi ne nesifiso sokuba seduze komuntu esimthandayo, okuyinto zingahlukaniswa zibe nezinkinga futhi izenzakalo ezijabulisayo. muntu othandekayo uhlobo ekahle, kokubili ngokoMthetho siqu, futhi wayebheka izimfanelo zangaphandle.
Youth ezweni lanamuhla
Kuyini osemusha? Lolu uhlobo ashukumisayo ukuthi akuyona njalo. Ngokuhamba kwesikhathi, ukuthuthukiswa umphakathi ke iyahluka kakhulu. Ngakho, ngenxa elikhula ngokushesha intsha ukusheshisa kwenzeka ngaphambili kakhulu. Kodwa ukuvuthwa nomphakathi kuza kamuva. Lena ngezinga elithile ngenxa yokuthi abazali lanamuhla ngiqaphile izingane kuqhubeke isikhathi eside.
Njengoba kunjalo kubo bonke abanye isikhathi, intsha uzibophezele ukusebenza ngenhloso ukuze bazisekele emsebenzini imali. Noma kunjalo, lo mkhuba lwamanje izinsizwa awufuni ukwenza "umsebenzi ezingcolile" okuletha Amaholo amancane inquma isimo ongaphakeme nomphakathi. Kunomkhuba bafise ukuthola konke ngesikhathi esisodwa.
Youth - isikhathi emnandi kunazo zonke ekuphileni komuntu. It is ezihambisana hhayi kuphela imizwa amaphupho romantic, kodwa futhi abanekhono okukhulu ngokoMthetho inhlangano esizayo. Izifundo kanye nezincomo bengqondo ukusiza lokuqondisa izinto ezenziwa ngabanye abantu abasha endaweni efanele futhi sibakhuthaze ukuba enze izinqumo ezifanele.
Pole umdanso, Pole Dance
Blue Coat: sizogqokani. iseluleko professional
Hyundai Sonata 5 izizukulwane